Soosaarka Mascara Shiinaha & Warshad | Wangtong
Tallaabooyinka saxda ah ee lagu marsado mascara
Qalabka / alaabta ceeriin
Baarkooda ilaa kareemka
Hababka / Nidaamyada
Tallaabada 1aad: Baarkooda curliska.
Ma dooneysaa inaad si sax ah u hagaajiso shucaaca baalasha-indha-indheynta ka dib, gaar ahaan madaxa isha iyo dhammaadka indhaha labadan daraf, waa inaysan iloobin.
Tallaabada 2: dejinta baarkooda Marka hore, aaladda baarkooda korontada waa la sii kululeeyaa, sidaas darteedna marka la mariyo ilbaxa wanaagsan ka dib, waxaa lagu ridi doonaa xididka iyo bartamaha baarkooda, illaa iyo inta in yar la joogo 2-3 ilbiriqsi , taas oo ka dhigi karta baalayaashaaga indho sarcaad iyo qallooc badan oo ka dhigi kara radiankeeda mid waara.
Tallaabada 3: Codso salka mascara.
Si fudud u codso lakab khafiif ah oo saldhig u ah ama ilaaliyaha ilaaliyaha si aad u yarayso dhaawaca ku soo gaadha jeedaldaada inta lagu jiro hawsha qurxinta.
Tallaabada 4: cadayo baarkooda.
Ugu horreyntii, hoos u fiiri si aad u kashifto xididdada nabarradaada inta ugu badan ee suurtogalka ah, ka dibna geli madaxa burushka xididdada baarkooda oo xaji laba illaa saddex ilbiriqsi. Kadib madaxa buraashka u jiido xagga dabada baarkooda. Samee dib-u-habeyn yar inta mascaradu weli qallalan tahay, illaa aad ka qanacsan tahay, buraashka baalashana si cufan u cadaya.
Tilaabada 5: Adkee indhaha iyo dabo.
Habka waa kahor intaan dheecaanka mascara uusan qallalan, furaha furaha ayaa cadaya isha baarkinka indhaha, wuxuu rabaa inuu isticmaalo habka muujiya shucaaca si loo buuxiyo, xooji saameynta indha-indheynta dhamaadka indhaha inay indhaha u ogolaato inay sii weynaato.
Shanlada ka dib shanlo shanlo, waa in shanlaynta timaha lakala baxo oo keliya, way u oggolaan kartaa xididka baarkoodu inuu da 'yahay.
Tallaabada 6: cadayo baarkooda.
Cadayo baarkooda hoostooda waa inay taxaddaraan oh, si ay isugu dayaan inay si fudud gacmahaaga u dhigaan, farsamadu waa inaad si tartiib ah u ruxdo oo aad u riixdo burushka baalasha indhaha, waad iska cadaadin kartaa baalasha dhaadheer iyo kuwa dheer ee soo socda.
Fiiro gaar ah: haddii baarkooda indhashareerka marwalba ay is gacan qaadaan, waxaa laga yaabaa inay sidoo kale iibsato tuwaallo waraaqo ah, dabool burushka, si aad uga fogaato khaladaadka.